Faa’iidada ay Kuu Leedahay Inaad Noqotid Qof Naxariista | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Calaamado Qatar Ah!
Ilhaan Ciise Maxamed, October 13, 2018
Faa’iidada ay Kuu Leedahay Inaad Noqotid Qof Naxariista
Maxay kuu tari kartaa naxariistu? Malaga yaabaa inay farxad kuu keento, ama ay caafimaadkaaga kordhiso? Inkastoo ay suurtagal tahay inay arrimahaas run yihiin, haddana Seynisyahanno iyo aqoonyahanno kale oo cilmibaaris wada ayaa sheegay inay naxariistu wax badan kuu qaban karto, sida inay cimriga kuu dheereyneyso.
Shaqaalaha mac-hadka naxariista ee Bedari, oo hoos taga jaamacadda ku taalla magaalada Los Angeles ee gobolka California, ayaa diyaar u ah inay wax badan ka sheegaan arrintaas.
“Waxaan ka eegeynaa dhinaca seyniska. Annaga intaan si wareeg ah u fariisanno ayaan gacmaha isqabsannaa. Waxaana ka hadleynaa faa’iidada maskax ahaanta ah iyo tan jir ahaaneedba ee la xiriirta isdhexgalka dadka”, waxaa sidaas yiri Daniel Fessler, oo ah agaasimaha mac-hadkaas.
Fikirka laga qabo naxariista ayaa dhawaan qabsaday hadalkeynta warbaahinta caalamka.
Waxay ahayd qodobka ugu weyn ee uu khudbaddiisa uga hadlay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, ka dib markii uu ka qeyb galay munaasabad lagu xusayay rugcaddaa ka tirsanaa xisbiga Dimuqraaddiga, oo lagu magacaabi jiray Elijah Cummings, kaasoo geeriyooday bishii lasoo dhaafay.
“In la noqdo nin awood leh waa in naxariis la yeesho. Ma jiro wax ay ku liidato inaad naxariis yeelato dadkana u dhimrisid”, ayuu yiri. “Ma jirto wax ay ku liidato inaad dadka kale caawisid. Khalad ma aha, sharaftaadana waxba uma dhimeyso inaad dadka kale qaddarisid”.
Ka dibna Ellen DeGeneres ayaa ku baaqday in naxariis la yeesho markii ay ka hadleysay saaxiibtinimadii kala dhaxeysay madaxweynihii hore ee Mareykanka George W Bush, waxayna tiri: “Naxariis isku sameeya ayaan idin leeyahay, taas ulama jeedo inaad u naxariisatid dadka fikirka wanaagsan kaa aaminsan oo kaliya. waxaan ula jeedaa inaad u naxariisatid qof kasta, wuxuu doonaba hakaa aaminsanaadee”.
Maanta oo ah maalinta naxariista adduunka(13-ka November), waxaan la eegayaa micnaha naxariista – iyadoo la isweydiinayo waa maxay sababta ay muhiim u tahay?
Tani waa waxa ay khubaradu doonayaan inay soo ogaadaan. Dhab ayeyna ka tahay inay cilmi baaristaas sameeyaan.
Howsha uu ku guda jiro Mr Fessler waxay la xiriirtaa sida dadka loogu dhiirrigalin karo inay naxariis yeeshaan, wuxuuna doonayaa in la wada arko faa’iidada ay taasi leedahay.
“Waxay ila tahay in la dhihi karo waxaan hadda ku nool nahay duni aysan naxariista ka jirin. Gudaha Mareykanka iyo caalamka intiisa kaleba, waxaan ku aragnaa qalalaase iyo dagaallo sii badanaya oo u dhaxeeya dad ku kala aragti duwan siyaasad ahaan ama diin ahaan”, ayuu yiri.
Wuxuu aaminsan yahay in naxariistu ay horumar gaarsiin karto dunida, halka naxariis darraduna ay horseedeyso burbur iyo dib u dhac kaliya.
Darnell Hunt, oo ah madaxa jaamacadda California, ayaa doonaya in daraasaddan ay noqoto mid diiradda lagu saaro siyaasadaha iyo qalalaasaha ka jira caalamka.
Inkastoo haddaba ay dunida ku nool yihiin dad badan oo naxariis leh, haddana Mr Fessler wuxuu yiri: “Naxariistu way kasii dhammaaneysaa dadka waxayna sii luminayaan qaddarinta ay isku hayaan”.
Mac-hadka uu khabiirkan agaasimaha ka yahay waxaa lagu aasaasay lacag dhan $20m (£16m) oo ay bixisay hay’adda samafalka ee Bedari Foundation, taasoo ay si wadajir ah u abuureen samafaleyaasha lagu kala magacaabo Jennifer iyo Matthew Harris.
Mr Harris wuxuu sheegay in cilmibaaristan ku saansan naxariista ay tahay mid loo baahnaa, “si loo fahmo sababta ay naxariistu lagama maarmaan u tahay xilliga uu hadda ku jiro adduunka”
Dhowr sir oo ku saabsan sida naxariis loo yeesho. Waxaa ku talisay khabiir dhinaca naxariista ah oo lagu magacaabo Gabriella Van Rij
Billow inaad si dhab ah u dhageysatid dadka kale(ka hor inta aadan ka fikirin jawaabo liddi ku ah hadalladooda)
Qofkii si qallafsan kuula dhaqma ula dhaqan si naxariis leh(Hadallo macaan uga jawaab kuwa adag ee lagugu dhaho).
Kula tali dadka kale inay dabeecad fiican kula dhaqmaan qof kasta.
Fahan marka ay jirto naxariis darro, haddii adiga lagugu sameeyana haka fal celinin, balse taas baddalkeeda ka fogow meesha ay xaaladdaas ka jirto.
Tags: Faa'iidada ay Kuu Leedahay Inaad Noqotid Qof Naxariista
Next post In 4 Maalmood Keliya la Shaqeeyo ma Kordhin Kartaa Wax soo Saarka Shaqada?
Previous post Islaam Naceybkii Iimaamka Noqday